Daawo Muuqaal cajiib ah” Hadii Alle uu Nabi kale usoo diro Muslimiinta masoo dhaweynayaan Mise? Waa Su’aal la waydiiyay Dr Zakir Naik oo si la yaab leh ugu jawaabay – Saafi News Somali News & Entertainment Hindi Af Soomaali Musalsal
Daawo Muuqaal cajiib ah” Hadii Alle uu Nabi kale usoo diro Muslimiinta masoo dhaweynayaan Mise? Waa Su’aal la waydiiyay Dr Zakir Naik oo si la yaab leh ugu jawaabay
January 8, 2017	137 Views Dalka Hindiya oo ah dal aad u diimo badan isla markaana ay adag tahay in shucuubta dalkaasi laga dhaadhiciyo diinta Islaamka, inkastoo ay ku nool yihiin Muslimiin badan , hadana waxaa dalkaasi inta badan lagu rumeysan yahay waxa ay ku magacaabeyn diinta Hinduuga.
Hadaba Daaciga weyn ee dalkaasi hindiya u dhashay Dr. Zakir Naik, ayaa inta badan isku taxalujiyo sidii uu dadkaasi kala doodi lahaa sida ay usoo raaci lahaayeen Diinta Islaamka oo ah diinta saxda ah ee Alle Weyne usoo diray Uunka, inkastoo Dr Zakir arrimahaasi iyo kuwa kale uu dhib kala kulmay xagga dowladda oo cabsi xoogan ka qabta sida ninkaasi dadka ay u raacayaan hadalkiisa.
Hadaba mid kamid ah Muxaadarooyinka uu jeediyo ayaa waxaa lagu waydiiyay Su’aal ka yaabisay dhamaan Muslimiintii halkaasi isugu timid ! midaasi oo aheyd “ Muslimiinta maxay ugu welwesan yihiin oo ay u dhahaan Nabigii ugu danbeeyay, ma waxaa jira oo ay cabsi ka qabaan in Nabi kale lasoo diro?”.
Su’aashaasi oo uu si layaab ah ugu jawaabay Dr Zakir Naik, ayaa waxaa ay iyadana noqotay mid dadka badankii ka yaabsatay, Zakir Naik ayaa ah dhaqtar ku taqasusay cuduradda guud isla markaana diinta Islaamka ka bartay daacigii waynaa ee Sheekh Axmed Diidaat.
Previous: Rag xeelad la yaab leh ku dhacay Malaayiin dollar oo maxkamad lagu soo taagay Nanjing
Next: Khudbadihii guddoonka baarlamaanka oo la soo gabagabeeyay